Kuyaqhubeka ukuqashiswa kwezindlu zomxhaso | News24
Kuyaqhubeka ukuqashiswa kwezindlu zomxhaso
UMASIPALA waseRay Nkonyeni usugxeke kakhulu ukuqashiswa kwezindlu zomxhaso (RDP) njengalokhu kubonakala kusaqhubeka kakhulu ezindaweni eziningi ezakhele lomkhandlu. Lokhu kuvele ngesikhathi kubanjwe isithangami sabezindaba ngoLwesibili olwedlule, nalapho kwabe kubuzwa ngokuba kuzoqedwa nini ukwakhiwa kwezindlu zakwaMasinenge okubonakala kuhamba kancane ukuqedwa kwazo.
Umphathi wamasipala uMnuz Max Mbili uthe sekusele kancane ukuba ziqedwe ukwakhiwa izindlu zakwaMasinenge kodwa kusalindwe ukuba kuqokwe usonkontileka ozoqedela umsebenzi njengalokhu lowo owabe ekhona wamiswa ngezizathu zokungawenzi kahle umsebinzi ayeqashelwe wona.
Uthe inkinga umasipala obhekene nayo ngohlelo lokuqedwa kwemikhukhu ngabantu abafike banikezelwe ngezindlu bese bona beyazishiya baqashise ngazo baphinde bagxumeke eminye futhi imikhukhu.
“Silwa nokuqeda imikhukhu, iningi lalabantu uhulumeni abakhela izindlu kwakube khona isikhalo sokuthi basuka ezindaweni zabo ngoba bebalekela izimpi zepolitiki, manje lezozimpi azisekho ngakho asisekho futhi nesidingo sokuba kwakhiwe eminye imikhukhu,”kuchaza uMnuz Mbili.
Umeya wamasipala UCynthia Mqwebu naye ushayelele esakhe isipikili ngokuthi kukhona abantu abake banikezelwe ngezindlu emuva kwesikhathi base bebonakala sebethi abafuni ukuhlala kuzona ngenxa yokuthi zikude nabangani babo.
Izindawo okuyizona ezihamba phambili ngokuqashiswa kwezindlu zomemixhaso kahulumeni iKwamasinenge, Mkholombe kanye nase Louisiana.
Ngokwemithombo kuthiwa abantu bakhokha cishe imali engama-R500 kuya ku-600 .
Kuthiwa abanye balabantu abaqashiza ngezindlu zomxhaso basuke benzela ukuthi bathole imali ethe xaxa bona bebe behlala kwezinye izindawo